HWANGU HONDO DZENYAYA - Tamban RELAY
runako Maitiro akanaka Deredza uremu pakutengeserana Zvirongwa zvemasikirwo Zvepabonde uye hukama kutarisira
4 mazano ekusaita kurasikirwa nezera rako panguva yekuzorora
Pakupedzisira zhizha zororo! Mukana wekuti pakupedzisira uzorodze mushure mekunetseka kwemwedzi ichangopfuura asi hatifanire kukanganwa zvidzidzo. Heano mashanu mazano ekuramba uri pamwero! Mamiriro ekunze akanaka ari pakupedzisira kugadzirisa mukati! Ehe hongu,…
Heano nzvimbo gumi dzemapati mazhinji muzhizha!
Isu takanyora maguta apo anopwanya zvakanyanya muFrance munguva yezhizha. Haisi chakavanzika kuti zhizha zvirokwazvo inguva yakanaka yekusangana nevanhu. Sei vazhinji vedu isu tichiurayana mumutambo gore rese?